Traduzioni di center da IngleseaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di center da IngleseaBirmano
အလိုအလျောက် တည့်မတ်ခြင်းနှင့် ဗဟိုကျစေခြင်း
it is right in the center of my chest
အဲဒါက ကျွန်တော်/ကျွန်မ ရင်ဘတ် အလယ်မှာ ပဲ
this is doctor porter in the emergency room triage center
သူကတော့ အရေးပေါ်ခန်း သုံးပွင့်ဆိုင် စင်တာက ဒေါက်တာပေါ်တာ ပါ
In Russia, the COVID-19 test was developed and produced by the State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR.
ရုရှားတွင် COVID-19 စမ်းသပ်မှုကို နိုင်ငံတော် ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒနှင့် ဇီဝ နည်းပညာဗေဒ သုတေသန စင်တာ (VECTOR) က တီထွင် ထုတ်လုပ်သည်။
သို့ရာတွင် 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 19 ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ (Wuhan) ဝူဟန်မြို့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနက နိုဗယ်ဗိုင်းရပ်စ်သည် ကူးစက်မှုနည်းပါးပြီး လူမှလူသို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိခြင်းကြောင့် ရောဂါကို ကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အခက်အခဲမရှိကြောင်း လူထုကို နှစ်သိမ့်ခဲ့သည်။
In the center ofasmall neighborhood located in the city of Pachuca, Hidalgo, the largest graffiti mural in all of Mexico, painted ontoacanvas of 200 homes, was inaugurated this July.
ဟီဒါဂိုပြည်နယ် ပချူကာ မြို့တွင် တည်ရှိသော ရပ်ကွက်ငယ်လေးအတွင်း၏ အလယ်မှာ နေအိမ် ၂၀၀ ကျော်၏ နံရံများပေါ်ကို အခြေတည်ကာ ရေးဆွဲထားသော မက္ကဆီကို၏ အကြီးဆုံး ဆေးရေးရောင်စုံချယ်သမှုကို ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင်လက ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
toua (Spagnolo>Inglese)turvapaikanhakijoita (Finlandese>Sloveno)pater filio canem dat (Latino>Inglese)do you like me (Inglese>Hindi (indiano))hinuhugasan ko ang gulay (Tagalog>Inglese)light kharab ho gyi h (Hindi (indiano)>Inglese)lungs meridian (Inglese>Hindi (indiano))google translation malay to english (Inglese>Malese)hindi me acche bol (Hindi (indiano)>Inglese)五胡十六国 (Cinese semplificato>Malese)italie (Inglese>Russo)maganda nman (Tagalog>Inglese)ghanqud plural (Maltese>Inglese)mills (Ceco>Slovacco)bayerischer (Italiano>Inglese)жизнеспособния (Bulgaro>Inglese)tengo gana de escucharte (Spagnolo>Italiano)kahulugan ng natural secrets (Inglese>Tagalog)my weakness is my family (Inglese>Arabo)quanti soldi gli resteranno dopo averlo comprato? (Italiano>Inglese)what is the meaning of mau (Inglese>Tagalog)nind tutna (Hindi (indiano)>Inglese)parang masarap (Tagalog>Inglese)hanngang maaga pa (Inglese>Tagalog)anner ikke (Norvegese>Inglese)